YEYINTNGE(CANADA): Thursday, September 06
နယူးယောက်မြို့တွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံပွဲ သိလိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အဖြေ
“နယူးယောက်မြို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး)”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့
ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ဧည့်သည် ပရိသတ်များ သိလိုတဲ့
မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေကို စုစည်းပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
၁. နယူးယောက်မြိ်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲ နေရာ အချိန် နေရက်အတိအကျကို
၂. ၀င်ခွင့်လက်မှတ် ဘယ်လိုရယူရမလဲ။
(အခမ်းအနားနေ့)စက်တင်ဘာ၂၂ ရက်နေတွင အစီအစဉ် မစတင်မီ အချိန် ၁ နာရီခွဲခန့်
ကြိုတင်ရောက်ရှိပြီးနောက်ဦးရာလူစနစ်နဲ တန်းစီဝင်ရပါမည်
၃.အခမ်းအနားနေ့မှာ ဘယ်လို ၀င်ခွင့်ပြုမှာလဲ။
အခမ်းအနားနေ့မှာ ဦးရာလူစနစ်နဲ တန်းစီဝင်ရမည်ဖြစ်၍ မနက် ၉ နာရီတွင်
တံခါးစပွင့်၍ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် တံခါးပိတ်ပါမည်
၅.တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်အောင် ဘယ်က ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်မှာလဲ။
၀ိုင်းဝန်းကြတဲ့ စေတနာရှင်တွေ၊ လုပ်အားပေးတွေ၊ မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့
အားလုံး ထည့်ဝင်မတည်မှုများနဲ့ မြန်မာတွေအားလုံး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားရတဲ့
တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခု ဖြစ်မြောက် အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
၆. နေရာ သတ်မှတ်ထားမှုတွေ ထိုင်ခုံနံပါတ် သတ်မှတ်ထားမှုတွေ ရှိပါသလား။
ထိုင်ခုံများ အားလုံးကို ဦးရာလူစနစ်နဲ့ ခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇.၀င်ခွင့်အတွက် စစ်ဆေးဖို့ ဘာလိုအပ်ပါသလဲ။
ပြည်နယ်က ထုတ်ပေးထားတဲ့ State I.D သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံနဲ့ အမည် ထင်ရှားတဲ့
ကတ်ပြား သို့မဟုတ် ပတ်စ်ပို့ ယူလာဖို့ လိုပါတယ်။
၈.အခမ်းအနားကို သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း လုပ်မှာလား။
အခမ်းအနားကို ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် အတိအကျ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၉.ပွဲကျင်းပနေတုန်း ရောက်ရင် ၀င်ခွင့်ရမှာလား။
၀င်ခွင့်မရနိုင်ပါ။ ပွဲမစခင် ပရိသတ်အားလုံး ခန်းမထဲ
၀င်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး အ၀င်အထွက်ကို လုံခြုံရေးနဲ့
၁၀.အခမ်းအနား မပြီးဆုံးခင် ပြန်ခွင့်ရမလား။
၁၁.အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာလို ပြောမှာလား။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောမှာလား။
၁၂.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မေးခွန်း မေးလို့ရမလား။
တန်းစီစဉ်အချိန်၌ စာရွက် ခဲတန်များ လိုက်လံ ပေးပါမည် မေးချင်သည်
မေးခွန်းများကို မေးနိုင်၍ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြန် ပေးရပါမည်
မေးခွန်းများကို လက်ခံချိန် ကျော်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း မေးခွန်းလက်ခံခြင်း
မေးခွန်းတွေကို မဲနှိုက်ပြီး ဖြေကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းများကို
အခမ်းအနားအတွင်း မေးခွန်း တိုက်ရိုက်မေးခွင့်ရမှာလား။
၁၄. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လက်ဆောင်ပေးလို့ ရမလား။
လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်။လက် ဆောငပစ္စည်း လက်ခံဌာန ထားရှိပေးပါမည်
ထုပ်ပိုးရပါမယ်။ လက်ဆောင်ရှင်ရဲ့ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ နဲ့
၁၅ .ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပေးခွင့်ရမလား။
မရပါ။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလက်ခံဌာန ထားရှိမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်သလို စစ်ဆေးပြီး၊
သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကတဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ
၁၆ . ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ခွင့် ရှိမှာလား။
၁၇ . သတင်းအဖွဲ့တွေကိုရော နေရာ သီးသန့်စီစဉ်ပေးမှာလား။
ဒေသခံ သတင်းရုပ်သံအဖွဲ့တွေ၊ မြန်မာသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေအတွက်
သင့်တင့်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက်
သီးခြားနေရာတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးထားပါမယ်။ ဒေသခံ မီဒီယာများ
၁၈ .တခြားရော ဘာတွေ သတိထားရမလဲ။
ခန်းမအတွင်း အစားအသောက်များ ယူဆောင်ခွင့် မရပါ။
မူးယစ်သောက်စားထားခြင်းကို လက်မခံပါ။ အခမ်းအနားက ထုတ်ဝေတဲ့
စာရွက်စာတမ်းကလွဲပြီး အခြား စာရွက်များ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ စာတမ်းများ
၁၉ .အခမ်းအနားအတွက် အကူအညီပေးချင်ရင် ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။
နယူးယောက်တာဝန် ခံ ကိုနေတင်မြင့် (၃၄၇) ၉၄၄-၇၃၄၁, ကိုအောင်ကြီးလွင်
(၆၄၆) ၆၇၈-၂၇၄၉ ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် သက်ဆိုင်ရာ
ဆက်သွယ်ရေးနဲ ပြန်ကြားရေး ကော်မတီဝင်များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/06/20120အကြံပြုခြင်း
ဖြူးမြို့မှာ ရဲဝန်ထမ်း ၂ ဦးက ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး သေဆုံး
ရိုက်ကူး - နေရီရီ DVB
Popular Myanmar News Journal ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ခေါင်းဆောင်ကိုဂျင်မီ၏ 2007 ခုနှစ်၌ တောင်ကြီး အကျဉ်းထောင်တွင်ထိမ်းသိမ်းခံရစဉ် ရေးသားခဲ့သော “လမင်းစန္ဒာအင်းလေးကန်သာ”၀တ္ထု မိတ်ဆက်ပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိCity Star Hotel တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ၀တ္ထု၏ဇာတ်ကောင်များအဖြစ်အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးနှင့် အင်းလေးကန်ဒေသထွက် ယက်ကန်းသည် ( Home made )များကို နိုင်ငံခြားဈေးကွက်အထိထိုးဖောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့သည့် မိန်းမပျိုတစ်ဦးတို့၏ အားပြိုင်မှုကို ရေးဖွဲ့ထားကြောင်း ကိုဂျင်မီကပြောသည်။ အဆိုပါ ၀တ္ထုသည် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ နောက်ကြည့်မှန် ၊ကိုမြအေး၏ မိုးကောင်းကင်၌ တိမ်တိုက်များစာအုပ်တို့နှင့်မတူပဲ မင်းသားနှင့်မင်းသမီးကို ဇာတ်သိမ်းခန်းတွင် ပေါင်းဖက်ပေးထားကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။ အဆိုပါ ၀တ္ထုကို သြရသစာပေမှ ထုတ်ဝေပြီး၊ လပ်ကီးဆဲဗင်း ရှပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးက ၀ယ်ယူခဲ့ကာ အနုပညာကြေးကို ကိုဂျင်မီ၏တောင်းဆိုချက်အတိုင်းပေးမယ်ဟုသိရသည်။ စာအုပ်ရောင်းချခြင်းနှင့်အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ရန်ကင်းစင်တာ ၌ ပြုလုပ်မည်ဟုသိရသည်။စာအုပ်ရောင်းဈေးမှာ 2000 ကျပ်ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို နုတ်ထွက်ခွင့်ပြု
The Voice Weekly နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို ၄င်းတို့၏ သဘောဆန္ဒအလျောက် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးက ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ယနေ့ည ၈ နာရီသတင်းတွင် ကြေညာလိုက်သည်။
လွှတ်တော်အသီးသီးက ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီနှင့် ကော်မရှင်များကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်မဟုတ်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းခုံရုံအား အခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း ပေးအပ်ထားသော တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ မထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းများကြောင့် စွပ်စွဲပြစ်တင်ခဲ့သော အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ အဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးက အတည်ပြုခဲ့သည့် နေ့တွင်ပင် ယင်းသို့ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံး ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ ဝင် စုစုပေါင်း ၉ ဦး အား ၄င်းတို့ ၏ သဘောဆန္ဒအလျောက် ရာထူးမှ ယနေ့ စက်တင်ဘာ လ ၆ ရက် နေ့ တွင် နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြု လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းသို့ နှုတ်ထွက် ခွင့်ပြုလိုက် ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ " ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ၀မ်းသာစရာ မဟုတ်သော်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ် မိပါတယ်။ " ဟု ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥပဒေ ကြမ်း ကော်မတီမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးစောလှထွန်း က လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေ သော အကြောင်းအရာကို သုံးသပ်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ခုံရုံးဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့အား စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်း အောင်မြင် ၊ သမ္မတထံသို့ အစီရင်ခံစာ အမြန်ဆုံးပို့မည်
အမျိုးသားလွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပုံ ခုံရုံးဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့အား စွပ်စွဲပြစ်တင်သည့် ကိစ္စ ယနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုနိုင်သည့် အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ အစီအ ရင်ခံစာအား သ၀ဏ်လွှာအဖြစ် အမြန်ဆုံးပေးပို့ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန် ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးသို့ ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် ခေါ်ယူခဲ့သော် လည်း တစ်ကြိ်မ်မှ လာရောက်စစ်ဆေးခံယူမှု မပြုခဲ့သည့်အတွက် ယနေ့ ပြည့်သူ့ လွှတ်တော် သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ အစီအရင်ခံရန် သတ်မှတ်ကာလပြည့်ပြီဖြစ် သည့်အတွက် အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကိုယ်စား လှယ်များ ၏ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကိုသာခံယူခဲ့ရကြောင်း ကို အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်နန်းဝါနုက ပြောကြားသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ထောက်ခံသူ ၃၀၇ မဲ ရှိပြီး မဲပေးရမည့် သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်လွန်သည့်အတွက် စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံး ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့တို့ကို စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုကို ယနေ့တွင် အစီ အရင်ခံစာ ရေးသားပြီး သမ္မတထံသို့ အမြန်ဆုံးပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
"ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ သုံးပုံ နှစ်ပုံမဲရတဲ့အတွက် စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုအောင်မြင်သွားပါတယ် ၊ ဒီပြစ်တင်တဲ့ အချက် ၂ ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကျမတို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ အနေနဲ့ သမ္မထံကို သ၀ဏ်လွှာအဖြစ် အမြန်ဆုံးပေးပို့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် သမ္မတ အနေနဲ့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး " ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ ဒေါ်နန်းဝါနုက ပြောသည်။
ပုဒ်မ ၁၄၄၊ ဦးပိုင်၊ ဦးတရုတ်ကြီး အမည်များဖြင့် လူသေအခေါင်း (၃)ခေါင်း
၅-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ၂ နာရီခန့်တွင် တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္မဏီနှင့် စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သည့် လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ၀က်မှေးကျေးရွာ၊ ဆည်တည်းကျေးရွာများရှိ မတရားသိမ်းပိုက်ခံထားရသည့် လယ်ယာမြေများအား ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် တောင်သူလယ်သမား ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင် ခရိုင်ဗကသ ကျောင်းသားများလည်း လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရာ ပုဒ်မ ၁၄၄၊ ဦးပိုင်၊ ဦးတရုတ်ကြီး အမည်များဖြင့် လူသေအခေါင်း (၃)ခေါင်း ပုံတူပြုလုပ်ပြီး မီးရှို့ မြေမြုပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို တောင်သူလယ်သမား ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ငါးထောင်ခန့်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။
အမေရိကန် သံအမတ်နှင့်အဖွဲ့ကို နေအိမ်မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံ (6-9-2012)
by Mar Ga Luelin on Thursday, September 6, 2012 at 9:34am ·
သြ - မိုးဟိန်း
တခြားတနေရာ လှူလိုက်ပါလား - တဲ့။
(စက်တင်ဘာ ၆ - ၂၀၁၂)
ကိုအောင်ဝေး ရေ. . .
ပရိတ်သတ် လက်ခုပ် သေချာမတီးလို့ ကောင်းကောင်း မက နိုင်တဲ့ ဇာတ်သမားတွေ ရှိသလားဗျ. . ဟုတ်စ။
ရှင်ပြုတုန်းက ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ရတာ ချည်း ပြောမနေနဲ့လေ. .
ဘာပရိယတ္တိ၊ ဘာပဋိပတ္တိ မှ အားမထုတ်ထားရင်
ဒီမိုကရေစီသမားဆိုတိုင်း ဒီမိုကရေစီ သမား ဖြစ်မလား၊
ကျောင်းသား ဆိုတိုင်း ကျောင်းသား ဖြစ်မလား ဟ၊
အာဏာရှင်စိတ်ပေါက်ပြီး၊ အာဏာရှင်လုပ်ရပ်လုပ်ခဲ့ရင် အာဏာရှင်ဖြစ်မှာပေါ့။
အာဏာရှင်တော်လှန်တဲ့သူတွေ၊ အဓမ္မဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေက ကျောင်းသားချင်းမို့လို့ခွင့်လွှတ်ပါ ကွာ လို့ ပြောရင် ခင်ဗျားတို့လည်း အာဏာရှင်ဂိုဏ်းသင့်ကုန်မှာပေါ့။
လူကိုတိုက်နေတာလား၊ မူကိုတိုက်နေတာလား ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကွဲပြားကြဦး။
ရန်သူ. . .
by May Thingyan Hein on Thursday, September 6, 2012 at 5:43am · မေသင်္ကြန်ဟိန်(မြစ်မခ)
စက်တင်ဘာလ ၆၊ ရန်ကုန်မြို့။
ကျမအနေနဲ့ကတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးမှာ ၀ိုင်းပေးကြတဲ့ comment တွေကို ဖတ်ရတာပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာခဲ့တယ်။
Comment တခုချင်းစီကိုသေချာလိုက်ပြီး အသေးစိတ်ဖတ်ပါတယ်။ Comment တွေမှာတော့ အမြင် နှစ်မျိုးတင်မကတော့ဘဲ သုံးလေးမျိုးကိုလည်း တွေ့လာရပါတယ်။ပိုပြီးတော့လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ comment ၀င်ပြီး ပေးကြသူတိုင်းကိုလည်း ကျမ လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ကတော့ ABSDF ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးချင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအပေါ်မှာ ခံစားချက်မရှိခဲ့ပေမဲ့၊ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မိဝေးဖဝေး တောထဲကို ပြေးဝင်သွားကြရှာတဲ့ လူငယ်တွေကိုတော့ အမြဲလေးစားစိတ်ရှိပါတယ်။
၁၉၈၈ခုနှစ်တုန်းကတော့ ကျမအသက်က ၁၄ နှစ် ရှိပါပြီ၊ ကျမဖေဖေက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နောင်ချိုမြို့ကနေ သပိတ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအခင်းပြီးလို့ အဖေတို့လို သပိတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်သူတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီနေစဉ်နဲ့ဖေဖေ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာ နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ သမီးကြီးအနေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေကိုလည်း မှတ်မိခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလည်း အသည်းအသန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရသလို၊ တောထဲကနေပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လည်း လူငယ်တွေ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာကို ကြားရတော့လည်း လေးစားစိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရေးအတွက် ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေါင့်ကဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သူတွေ၊ ပါဝင်နေဆဲက သူတွေနဲ့ ဆက်လျက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့သူတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ လေးစားစိတ်က အမြဲရှိနေမှာပါ။
ငါကတော့ ဘယ်တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့တယ်၊နင်က ခုမှ လာပြောနေယ် ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်တတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ comment တွေကို ဖတ်ပြီးတော့လည်း ပြုံးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြစ်မြင်စိတ်တော့ မရှိပါဘူး။ သူတို့ ကျမရဲ့ ဆောင်းပါးတွေအပေါ်မှာ ဝေဖန်လို့ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောရင်တော့ ဝေဖန်မှု ဆိုတာ ရှိလာမှာပါ။
ကျမရဲ့ သဘောထားကတော့ အမြင်မတူရင်လည်း ရန်သူ လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ဆန်
တိုက်ခိုက်ခြင်း ဘယ်တုန်းကမှ မပြုခဲ့သလို၊ ယခုလည်း ပြုမည် မဟုတ်၊ နောင်လည်း ပြုမည်မဟုတ်ပါဘူး။
Comment တွေကို သေချာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်း ရေးသားတဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်ကို လှမ်းမြင်တွေ့ရတာပါပဲ။ အချို့ကလည်း ရိုးရိုးသားသား၊ အချို့ကလည်း စာဖတ်ပြီးမှ သေချာပေးကြပါတယ်။
အချို့ကတော့ အမည်ရင်းနဲ့လည်း မဟုတ် Profile အမှန်လည်း မတင်ထားတော့ ဘာရေးရေး ရှက်စရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်နှလုံးမျိုးနဲ့ comment ပေးပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရေးကို စိတ်ဝင်စားကြလို့သာ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြတာပါ။ မြန်မာ့ပြည်ဒီမိုကရေစီရစေချင်ရင်တော့ဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးမျိုးရှိဖို့ လိုမယ်လို့လည်း တွေးမိပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်မြင်ခဲ့တာ ကိုယ်ကြားခဲ့တာတွေကို ရေးရမှာပါ၊ ကိုယ်ခံစားရတာ ကိုယ့်အမြင်လည်း ပါချင်ပါမှာပေါ့။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုတာကတော့ စာဖတ်သူရဲ့ အမြင်ပါဘဲ။ ဘယ်လိုအမြင်မျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေးစားပါတယ်။
ကိုမိုးသီးဇွန်ကို ၁၉၈၈ခုနှစ်ကတည်းက နာမည်သာ ကြားဖူးခဲ့တာပါ၊ သတင်းတွေသာ ကြားဖူးခဲ့တာပါ။
တခု သတိပြုစေချင်တာကတော့ အခု ဒီစာကို ကျမရေးနေတာက ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ အကြောင်းကို ရေးနေခြင်း မဟုတ်ပါဘူး၊ သူဖြေတဲ့ အဖြေတွေကိုပဲ ကျမက ပြန်ရေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ရေးရာမှာလည်း ကျမရဲ့ အသံဖမ်းစက်ထဲက ပါသမျှ အကုန်လုံးကို ရေးပါတယ်။ ချန်ထားခဲ့ခြင်း ဖြည့်စွက်ခြင်း လုံးဝ မရှိပါဘူး။
ခုလို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တွေ့ရမှသာ ပထမဆုံး တွေ့ဖူးမြင်ဖူးခြင်းဖြစ်သလို၊ သတင်းထောက်တွေရဲ့ အမေးကို ဖြေဆိုမှသာ ကိုမိုးသီးဇွန်းကို စသိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ facebook ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံသာတွေ့ဖူးခဲ့တာပါ။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တက်လာခဲ့ကြတဲ့ သတင်းထောက်တော်တော်များများလည်း အဲလိုပဲထင်ပါတယ်။
ခုလည်း ကျမတို့ထက်အသက်ငယ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရတဲ့ အသက် ၂၀၀န်းကျင်အရွယ် လူငယ်သတင်းထောက်လူငယ်တဦးက ဆက်ပြီး မေးပါတယ်။ ကျောပိုးအိတ်နဲ့ တီရှပ်နဲ့ ဆံပင်ချီထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ ဟန်နဲ့ သတင်းထောက် လူငယ်တဦးပါ။ (သူ့ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို ထည့်ရေးသားခြင်းဟာ စာဖတ်သူကို မျက်စိတည်းမြင်လာအောင် ပုံဖော်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်)
မေး။ ။ မြောက်ပိုင်းကိစ္စအတွက် တခုခုများ သမိုင်းအမှန်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် အားလုံးညှိုနှိုင်းပြီါ် သမိုင်းမှန်ကို ချန်ခဲ့နိုင်မလား။
ဖြေ။ ။မိုးသီးဇွန်း- သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ကျနော် တစ်ခါတည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော် မဲဆောက်နယ်စပ်မှာ ပနောင်းက လူကြီးတွေ၊ ကိုထင်လင်း၊ မနန်းစောတို့နဲ့တွေ့တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့လည်း ကိုယ်တွေ့ ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတာကိုး။ သူတို့ကြုံခဲ့ရတာတွေ။ သူတို့ခံစားချက်၊ သူတို့လွတ်ဖို့အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ငါတို့ခွပ်ဒေါင်းအလံလို့လည်း သူတို့ ပြန်ပြီးတော့ အော်လာလို့ရတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က မင်းတို့ရဲဘော်တွေဟာ ငါတို့ ရဲဘော်တွေပါလို့ ကျနော်တို့ ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုက အသိအမှတ် ပြုပါတယ်။သူတို့ကလည်း ကျနော် တို့ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်၊ ညီငယ်၊ ညီမငယ်တွေပါ။ဒီအစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးအောက်မှာ ကျနော်တို့က တရားခံတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ အဲဒါကလည်း ဗမာပြည်ရဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြောတာပဲ။အဲဒီတော့ သူတို့မိသားစုတွေနဲ့ သွားတွေ့မယ်။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့လည်း သွားတွေ့မယ်။သူတို့ကို သွားအားပေးမယ်။ သွားပြီးတော့ ဂုဏ်ပြုမယ်။အဲလိုအစီအစဉ်လည်း ရှိပါတယ်။
ကိုမိုးသီးဇွန်က ခဏ နားပြီးမှ ဆက်ပြောပါတယ်။ အသံကလည်း ပိုပြီးကျယ်လာသလို၊ စိတ်လည်းတိုလာပုံရပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မိုးသီးဇွန် - ဒါဘာသဘောလဲဆိုတာ ကျနော် ရှင်းနေပြီ။ ဒါကျနော်တို့ရဲ့ ညီတွေ၊ညီမငယ်တွေ၊ ဒီထက် အဖြေထက်ကောင်းတာ ဘာရှိဦးမလဲ၊ပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်။ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာတွေ အားကိုးပါတယ်၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒီ MESSAGE ကို ရဲဘော်တွေဆီကို ပို့ပေးပါ။အထူးသဖြင့် သေဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ မိသားစုတွေထံကို ပို့ပေးပါ။ဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ ဂုဏ်ပြုရမယ့် ရဲဘော်တွေ။အဲဒီတော့ အချက်အလက်တွေ ရှာဖွေနေမှ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေ အဲဒီအတွက် ကျတော် ခံယူထားပါတယ်။
နောက်တဦးကတော့ အမျိုးသမီးသတင်းထောက်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း လူငယ်ပါပဲ။ လူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့ သူမေးတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ကြိုပြီး ပြင်ဆင်လာခဲ့ပုံရပြီး သွက်သွက်လက်လက်နဲ့မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
မေး။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲနေတာတွေ ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဓလေ့တွေကိုလည်း သိတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အကျင့်ကိုလည်း သိတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုလည်း ချစ်လို့ပြန်လာပြီး ကူညီမဲ့ ဦးမိုးသီးဇွန်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မိုးသီးဇွန်- အခုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်နဲ့အရင်းနှီးဆုံး လူတွေပါ။ အနီးကပ်လက်တွဲနေတာ ရခိုင်ကတပ်ဖွဲ့တွေပါ။ အခု … ကြားဖူးလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်က အဲဒီမှာ အတွင်းရေးမှူး။ကျနော်က ရခိုင်ဆိုရင် ဘယ်တပ်ရင်းကမှ မဟုတ်ဘူး။ တပ်ရင်းတစ်ရင်းထဲမှာကို အတူတူအိပ် အတူတူစားဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုလိုချစ်ခဲ့ရတဲ့ သ်ိန်းဇော်ဦး(ရခိုင်)တောင် ဟိုမှာ ရှိသေးတယ်။အဓိကပြဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာ သိပ်ကို ဆင်းရဲသွားတယ်။ သူတို့မှာ MANAGEMENT နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။သူတို့မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဒါဟာ အဓိက ပြဿနာပါ။ဒါဟာ ကျနော်က အပြောဆို အမှုဆောင်အသစ် ကနေ ဒီအထိပေါ့နော်၊ တိုင်းရင်းသားများ ရခိုင်အပါအ၀င်ဟာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရမယ်။ ပြည်နယ်တွေမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရသည်။သူတို့ဆီက အဓိက Resources တွေ၊ ဒီအရင်းအမြစ်တွေကိုက ဓာတ်ငွေ့တွေထွက်တယ်။ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ။ လယ်တွေ။ငါးတွေ အကုန်လုံးကို သူတို့က သူတို့ ကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။အဲဒီအခါမှာ ရခိုင်အများစုက ထိုင်းဘက်ကို ထွက်သွားကြတာ တွေ့နေရတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေနည်းတာမဟုတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်လူငယ်လူရွယ်တွေက စစ်ထဲ ၀င်သွားကြတယ်။အဲဒီတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘာမှကိုကို မရှိတော့ဘူး။
ပြီးတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်ကပဲ ဆက်ပြောပါတယ်။
ဖြေ။ ။ အဲဒီတော့ မြန်မာမှာ ခြောက်သန်းက ထိုင်းနိုင်ငံထဲရောက်နေတယ်။ ငါးသိန်းက မလေးရှားထဲ ရောက်နေတယ်။အဲဒီအထဲမှာ တစ်သိန်းက သူ့ဟာသူ လျှောက်သွားနေတယ်။ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ပြည်လုံး ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ။အဲဒီတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျော်ဖြတ်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူလူထုတွေ ရပ်တည်နိုင်ဖို့၊ ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။သူတို့ ပြည်နယ်ကို သူတို့ အုပ်ချုပ်ရမယ်။သူတို့သဘာဝသယံဇာတတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။အခု သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်းက ဒါကို မြင်လာတယ်။ ပိုပြီးတော့ လုပ်လာတယ်။အဲဒါကို မြင်တဲ့အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဖွဲ့တယ်၊ အဲလိုကော်မရှင်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေက ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။ အခု ကျနော် တို့ပြောနေတာတွေက တရားလည်းမ၀င်ဘူး။ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောနေတာ။အဲဒီတော့ အစီရင်ခံစာကို အမြန်ဆုံးထွက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
နောက်သတင်းထောက်တဦးကတော့ Massenger ဂျာနယ်က အမျိုးသားသတင်းထောက်တဦးဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ အခု ကိုမိုးသီးဇွန်ကို BLACK LIST ထဲကနေ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ အဝေးရောက်ချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေကို ပယ်ဖျက်ထားပေးခြင်း မရှိသေးပါဘူး၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သမ္မတနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုများ တောင်းဆိုသွားဖို့ ရှိပါသလဲ။ပြီးတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်ကို မေးချင်တာက ကိုမိုးသီးဇွန်ကို နိုင်ငံရေး လုပ်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီစွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမိုးသီးဇွန်အနေနဲ့ ဘယ်လိုများတုန့်ပြန်ပြောကြားချင်ပါသလဲ။ ပြီးတော့ အခု ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ကို အဝေးရောက်ပြစ်ဒဏ်ကနေ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း မရှိပါဘူး။အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တာဝန်ရှိသူအနေနဲ့ ဘာများ ပြောကြားချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ကိုထွန်းအောင်ကျော် - ကျနော် တို့ အနေနဲ့တော့ တောင်းဆိုဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် တို့ဟာ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ တော်လှန်ရေးပြီးတော့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးထဲမှာ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုရှိတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာက အကူအညီမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာက အကူအညီမပေးကြဘူး။အဲဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့က အင်မတန်တောင့်တင်းတဲ့ တပ်မတော်ကို တိုက်လို့ မရခဲ့ဘူး။အဲဒါကလည်း ကျနော် တို့ ပါတီရဲ့ မအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျတော်တို့ဟာ တစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်း စည်းလုံးခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့အခုလာတဲ့လူတွေအားလုံး၊ အထူးသဖြင့် ခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေက်ို သိစေချင်တာက ကျနော်တို့ အခု ဒီကိုလာတာ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်လာတာ၊ ဘယ်သူ့ဆီကမှလည်း မတောင်းဘူး။ ဘယ်သူ့ဆီကမှလည်း မယူဘဲနဲ့ ခြေသလုံးအတောင့်ခံပြီး တစ်နေ့ကို ရှစ်နာရီဆယ်နာရီ မတ်တပ်ရပ်ပြီး US မှာ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ချွေးနည်းစာနဲ့ ကိုယ် တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကျတော်တို့လုပ်တာ၊ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်လာတာ၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ဒုက္ခကို မကြည့်ရက်လို့ လာတာ။အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က NGO ရဲ့ အကူအညီလည်း မရှိဘူး။ဘယ်ကမှလည်း မရဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုကူညီချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပြန်လာတာ။ ဘယ်ကမှ အထောက်အပံ့မရှိဘူး။
အဲလို ပြောပြီး ကိုမိုးသီးဇွန်က ဆက်ဖြေပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ကျနော်ကို ဘာကြောင့် အစိုးရက ပြန်လာခိုင်းသလဲဆိုတာကိုပြောရရင် ကျတော် တစ်ချိန်က ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ အစိုးရက သိလို့ပါပဲ။ အတူတူတွဲလာတဲ့ ၈၈ က ရဲဘော်ရဲဘက်တွေက ဘာလို့ ကျွန်တော့်ကို ဘာကြောင့် ခုလို သည်းသည်းလှုပ်ကြိုဆိုကြသလဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က အသိဥာဏ် ရှိတဲ့ ရဲဘော်တွေပါ။အဲဒါ ကျနော်လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ်မှာ သူတို့ ဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ။တောင်ထိပ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ သစ်ပင်ဟာ လေအတိုက်ခံရမှာပဲ။ အဲဒီတော့ တိုက်တဲ့ဟာတွေကို ကျနော်တို့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
နောက် သတင်းထောက်အမျိုးသား တဦးကလည်း ရှေ့က မေးခဲ့တဲ့ မြောက်ပိုင်းကိစ္စကိုပဲ အစပြန်ထုတ်ပြီးမေးပါတယ်။ လူငယ်သတင်းထောက်တွေဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့မေးခွန်းကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူ့မေးခွန်းကို မီဒီယာသမားတွေရော အားလုံးကပါ ငြိမ်ပြီး နားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။လက်ရှိမြောက်ပိုင်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို မီဒီယာတွေအလယ်မှာ ထားပြီး နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောဖို့ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဟိုဘက်ဒီဘက် တွေ့ဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခု ကျနော်တို့ ဆွေနွေးချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာခဲ့တာပါ။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထက် အခု ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးချက်တွေဟာဆိုရင် ၁၇ ရက်နေ့၊ အမေရိကန်ကို ပြန်ဖို့ ရှိတဲ့အတွက်၊ ဒါ့အပြင် အခုလာရတာဟာ သမ္မတရဲ့ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချောမွေ့ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်မှာတော့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ဒါကလည်း ရဲဘော်တွေအတွက် ညီအကိုမောင်နှမတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ သူတို့ကို ဒီတစ်ခေါက်မှ ဆွေးနွေးပေးဖို့ မရှိဘူး။ဒီတစ်ခေါက်မှာ ကျနော် အလုပ်ချင်ဆုံးဆန္ဒက သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုပေးချင်တာပဲရှိတယ်။အဲလို အခမ်းအနားကို လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒီဟာနဲ့တခြားကိစ္စနဲ့တော့ ဆွေးနွေးစရာမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမြောက်ပိုင်းကိစ္စက ကျွန်တော်တို့တွေ သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ဆွေးနွေးစရာမလိုပါဘူး။
ကိုသံခဲတို့ကလည်း အခုအချိန်မှာ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အလျှောက် အဲဒီကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် စာတမ်းကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့် ကျနော်ကလည်း ပြောထားတယ်။ သူတို့ကလည်း စစ်ဆေးပြီးတော့ လုပ်ပါ့မယ်လို့ ပြောထားတယ်။တကယ်တမ်းခံခဲ့ရတဲ့အထဲမှာ ကိုထိန်လင်းတို့၊ မနန်းစောတို့နဲ့လည်း သွားတွေ့တယ်။သူတို့တွေနဲ့လည်း ဆွေးနွေးပြီးပြီ။ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်မယ်။ အမှန်တရားကို မဖုံးကွယ်ဘူး။ တကယ်လို့ ရဲဘော်တွေ ရောက်နေရင် တွေ့မယ်။
သူကပဲ ဒုတိယမေးခွန်းကို ဆက်ပြီး မေးပါတယ်။
မေး။ ။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူထုခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်ထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့က ရော အဲလို သဘောထားပြီး ၀င်လာတာလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ရန် အနည်းငယ်သာ ကျန်ပါတော့သည်။ ရှေ့ဆက်ဖော်ပြပေးပါမည်။
by May Thingyan Hein on Thursday, September 6, 2012 at 5:25pm · မေသင်္ကြန်ဟိန်(မြစ်မခ)
စက်တင်ဘာလ ၇၊ ရန်ကုန်မြို့။
ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ရေးမိတဲ့အတွက် ကျမမှာလည်း ကဗျာဆရာကိုအောင်ဝေးရဲ့ ကဗျာထဲမှာတောင် ထည့်စပ်တယ်ဆိုတော့…ဒီဆောင်းပါးကို စောင့်ဖတ်တဲ့သူ တော်တော်များတယ်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါကလည်းသူ့အမြင်ပါပဲ။ ကျမတော့ အဲလိုပဲ သဘောထား နားလည်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီဆောင်းပါးကို စောင့်ဖတ်ကြတယ် ဆိုတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးနဲ့ကိုမိုးသီးဇွန်တို့အပေါ်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှု ရှိတယ်ဆိုတာ သိသာစေပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တော့လည်း နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ သတင်းထောက်တွေကြားမှာ စုံထောက်အချို့ကိုလည်းတွေ့မြင်ရတာပါပဲ။
အထူးသဖြင့် သတင်းထောက်တွေကလည်း လူငယ်တွေ တော်တော်များများဖြစ်နေတာလည်း ထူးခြားတယ်လို့ ပြောလို့ရမှာပါ၊
ကျမတို့မြစ်မခမီဒီယာကတင် ကျမ အပြင်၊ ကျော်ဇင်မန်းနဲ့ ထက်အောင်ခန့်ဆိုတဲ့ အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်အရွယ် သတင်းထောက်တွေက သူတို့လည်း သတင်းယူပါရစေလို့ စိတ်ဝင်စားစွာပြောပြီး သတင်းယူခဲ့ကြတာပါ။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်း တောက်လျှောက်လူငယ်သတင်းထောက်တွေကပဲ မေးခွန်းတွေ မေးသွားခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ဟာ ၈၈ ရဲ့ သမိုင်းရော၊ ABSDF အဖွဲ့ရဲ့ သမိုင်းကိုရော သေချာမသိကြသေးတဲ့အရွယ်တွေပါ။ ဒါပေမဲ့လို့ သူတို့ သေချာသိချင်လို့ မေးကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူငယ်တွေ အမြဲဦးဆောင်နေတယ်ဆိုတာက ဒီလိုနေရာတွေမှာလည်း သိသာစေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ လူကြီးတွေက မျက်နှာပူရမဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေ မေးဖို့စဉ်းစားတွေဝေနေချိန်မှာ လူငယ်တွေကပဲ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မကြည့်ဘဲ မေးလေ့ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။
နောက်တချက်က သူတို့ လေးစားတဲ့ ABSDF အဖွဲ့ရဲ့ သမိုင်းမှာ အမည်းစက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြောက်ပိုင်းကိစ္စကိုလည်း ကိုမိုးသီးဇွန်တို့လို တာဝန်ကြီးကြီးယူခဲ့တဲ့ သူတွေဆီကနေ ဖြေရှင်းပြောဆိုကြတာကိုလည်း ကြားချင်ပုံရတဲ့အတွက် ဒီမေးခွန်းကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါမေးနေကြတယ်လို့ ကျမတော့ထင်မှတ်မိပါတယ်။
နောက်တချက်ကတော့ ကိုးမိုးသီးဇွန်ရဲ့ရဲဘော်များက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို ကိုင်ပြီး ကြိုဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေ များနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ခုမေးနေတဲ့ကလေးကလည်း သူကပဲ ဒုတိယမေးခွန်းကို ဆက်ပြီး မေးပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ကြိုတာဟာ ဒါဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားဖြစ်တယ်လို့ ကိုမိုးသီးက ပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူထုခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်ထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့က ရော အဲလို သဘောထားပြီး ၀င်လာတာလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။မိုးသီးဇွန်- ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီမှာ အဲလိုမျိုး တယောက်နဲ့တယောက် သူက မဲလို့သူက ဖြူလို့သူကတော့ ဘာ ဘာသာ ကိုးကွယ်လို့ ဆိုပြီးတော့ မသတ်မှတ်ဖို့တော့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်နေကြတာပါ၊ သူတို့ဟာ သူတို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာကိုတော့ ခွင့်ပြုပါလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော့်ကို ရဲဘော်တယောက်က ပြောပါတယ်။ အခြားသက်မှတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်၊ ဒါဟာ သူတို့ သတ်မှတ်ချက် သူတို့ရဲ့ အမြင်ပါ။ ဒီမိုကရေစီပါ။ ကျနော့်ကို ချစ်တဲ့ သူတွေက သူတို့ခေါင်းဆောင်လို့သတ်မှတ်တယ် ဒါလည်း ဒီမိုကရေစီပဲ။ ဟိုလူ မသတ်မှတ်ရဖူး၊ ဒီလူ မသတ်မှတ်ရဖူးဆိုတာကတော့ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ခုဆို facebook တွေမှာ ရေးနေတယ်၊ ရေးနေတဲ့အခါမှာလည်း ချစ်ရင်ချစ်သလို၊ မုန်းရင် မုန်းသလိုပေါ့ဗျာ။ ကျနော့် ရဲဘော်တယောက်က ပြောတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ facebook ကို ဒီမိုကရေစီအတွက် အသုံးမချဘူး ဆိုတော့ ကျနော်က ရဲဘော်ကို ပြန်မေးတယ် မင်း နယူးယောက်တိုင်းကို ဖတ်ဖူးလား၊ ၀ါရှင်တန်ပို့စ်တွေ၊ ဘန်ကောက်ပို့စ်တွေ ဖတ်လား။ သူက မဖတ်ဖူးတဲ့။ အဲဒါဆို မင်းဖတ်ကြည့်လို့ ပြောတယ်၊ အဲဒီမှာ ကော်မန့်တွေက ရာနဲ့ချီပြီး ဒီလိုပဲ ရေးနေကြတာပဲ။ကျနော်က ဖတ်တော့ ဘာကိုသွားတွေ့လည်း ဆိုတော့ အတိုက်ခံရဆုံး ၃ မျိုးလောက်သွားတွေ့တယ်၊ ဒါအနောက်တိုင်းသားတွေနော် ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ စူပါ ဂျေးဇက်ခရက် အမြဲလိုလိုအတိုက်ခိုက်ခံနေရတာ၊ တခါတလေ ငေးလို့တောင်ရေးတယ်။ မိုဟာမက်လည်း ရစရာမရှိဘူး၊ ဗုဒ္စလည်း ရစရာမရှိဘူးရေးကြတာပဲ။ နေ့တိုင်းရေးကြတယ်၊ပြီးတော့ အိုဘားမား အကုန်လုံးကို ရေးနေကြတယ် အဲဒါကို ကျနော်တို့က ဒီမိုကရေစီလို့ ခေါ်နေတာလေ။
မေး။ ။ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ရဲ့ ရှေ့တရက်မှာ ABSDFက ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့လည်း ရောက်လာတော့ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ သူတို့နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အစီစဉ်ရှိလားအဲဒါလေးကိုသိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ဦးထွန်းအောင်ကျော်- ကိုနိုင်အောင်တို့ ကိုသောင်းထွန်းတို့ကလည်းသူတို့ဟာ သူတို့လာကြတာ ဖြစ်တယ်နော်၊ ကျနော်တို့ တယောက်နဲ့တယောက် စပ်ဆက်မှုမရှိဘူး၊ နောက် ၀န်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်း ကျနော်တို့ မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ တွေ့တာ၊ ပထမတုန်းကတော့ ကျနော်တို့ပဲ တွေ့ရမယ်ထင်ထားတယ်၊ အစည်းဝေးခန်းထဲမှာ သူတို့နောက်ကျမှ ၀င်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ အံ့သြသွားတယ်၊ ခုလိုတွေ့တယ်ဆိုတာ တိုင်ပင်ပြီးတော့ စည်းရုံးပြီးတော့ လို့ထင်စရာဖြစ်သွားတယ်၊အဲဒါကို ကျနော် ရှင်းမယ်၊ ကျနော်တို့ တယောက်နဲ့တယောက် စပ်ဆက်မှု မရှိဘူး၊ အစိုးရအဖွဲ့တွေကလည်း ဆွေးနွေးပြီးတော့ ချပေးလို့ တွေ့လိုက်ကြတာ၊ ကျနော်တို့ ရှေ့ဆက်သွားမှာလည်း ပူးပေါင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့နဲ့ သူတို့ လုပ်ပုံလုပ်နည်း မတူကြဘူး။ အဲဒါကို ကျနော်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်။
နောက်တဦးကတော့ လူငယ်သတင်းထောက်တဦးပါပဲ။သူကလည်းမြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းကိုပဲ မေးပါတယ်။
မေး။ ။မြောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသားတွေကိုသတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စမှာတကယ်ပဲ စစ်ထောက်လှမ်းရေး သူလျှိုဆိုတာကိုသိခဲ့လို့ သတ်ဖြတ်ခဲ့တာလား ဆိုတာကို အတည်ပြုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါ။
ဖြေ။ ။ ဦးမူးသာ- ဒါတွေက တကယ့်ကို ပွင့်လင်းသွားတဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲကတဲ့သူတွေအားလုံးကို လက်ရှိအစိုးရကနေပြီးတော့မှ ဒါကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒါကို အာဏာရှိထားတဲကအဖွဲ့အစည်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ အဆင့်ဆင့်တွေနဲ့သူတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့အခမ်းအနားမှူးဦးရွှေစင်ထွန်းက လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့သူတို့အဖွဲ့ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရက လက်ရှိမူဝါဒအသစ်တွေနဲ့သွားနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့အနေနဲ့အစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေပြောပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ အမေးအဖြေကဏ္ဍပြီးဆုံးသွားပြီလို့ မှတ်ယူတဲ့အတွက် အသံဖမ်းခြင်းကို အဲဒီမှာပဲ ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဦးမိုးသီဇွန်နဲ့ သတင်းထောက်တွေ တဦးချင်းမေးတာမျိုးတွေ၊ ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကို မေးတာမျိုးတွေ တွေ့ရသလို၊ ဦးမိုးသီးဇွန်ကလည်း သူ့ရဲဘော်တွေကို လက်ဆွဲ၊ ပုခုံးဖက်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ဦးမိုးသီးဇွန်ကို နှုတ်ဆက်ရင်း အင်တာဗျူးခွင့်တောင်းဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဦးမိုးသီးဇွန်က အင်တာဗျူးမရတော့ပါဘူး၊ ခုဏဖြေပြီးသွားပါပြီလို့ ပြောတဲ့အတွက် တဦးချင်း အင်တာဗျူးခြင်းကို လက်လျော့ခဲ့ရတာပါ။
ဒါပေမဲ့နောက်ရက်တွေမှာလည်း တိုက်ရိုက်ဖုန်းနံပတ်မရှိတဲ့အတွက် အခြားတဆင့်ခံဖုန်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အင်တာဗျူးရဖို့ ကြိုစားခဲ့တာ ခုချိန်ထိပါပဲ၊တကယ်လို့များ ဦးမိုးသီးဇွန်မပြန်ခင်မှာ အင်တာဗျူးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် မေးမြန်းပြီး ရေးသားးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်လို့ ပြန်လာတာ ဆိုရင် ကျမတို့တွေ ကြိုဆိုကြရမှာပါ။ မြန်မာပြည်ကို တကယ်ပဲကူညီပံ့ပိုးချင်စိတ် ရှိခဲ့ရင်လည်း ၀မ်းသာကြရမှာပါပဲ။
ကျမတို့သတင်းသမားတွေကတော့ ကောင်းခြင်းရလဒ်ပြုသူတိုင်းကို ပြုကြောင်း ရေးသားပေးဖို့ တာဝန်ရှိကြသလို၊ ဝေဖန်ထောက်ပြဖို့ လိုအပ်ရင်လည်း အမုန်းခံရမှာကို မကြောက်စတမ်းရေးသားကြရမဲ့ သူတွေပါ။
မျှတပြီး ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ကင်းတဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ကျမ အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျမ လေးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ ဆရာတင်မိုးရဲ့ ကဗျာကို မိတ်ဆွေတဦးက ပို့ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဒီကဗျာလေးကိုလည်း မိတ်ဆွေများ မျှဝေနိုင်အောင်ပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖ...
ပုဒ်မ ၁၄၄၊ ဦးပိုင်၊ ဦးတရုတ်ကြီး အမည်များဖြင့် လူ...
အမေရိကန် သံအမတ်နှင့်အဖွဲ့ကို နေအိမ်မှာ လက်ခံတွေ့ဆံ...